Home News Muqtaar Rooboow oo ka digay in Doorashada K/Galbeed dib loo...
Muqtaar Rooboow oo ka digay in Doorashada K/Galbeed dib loo dhigo!!
Iyadoo walaac laga muujinaayo Dib u dhac ku yimaada Dorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo ah musharax u taagan qabasahda xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Maanta Magaalada baydhabo oo Xarun KMG u ah maamulkaasi kulan kula qaatay qaar kamid ah xildhibaanada koonfur galbeed.
Waxaa lagu wadaa in Magaalada Baydhabo oo Xarun KMG u ah maamulka Koonfur Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay ku tartamayaan musharixiin badan oo uu kamid ah Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Previous articleDad dhawaan Ciidamo Ajnabi ah kala soo Baxeen Beerta Aadan cadde Ee Gobolka Sh/hoose oo lasii daayay!!
Next articleMasuuliyiinta Galmudug oo laga Mamnuucay in Ku shiraan Magaalada Cadaado!!